Tuesday August 11, 2020 - 19:26:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faah faahin dheeraad ah weerarkii aadka u xooganaa ee shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska Asluubta DF ayaa lagu sheegay in weerarkii shalay lagu dilay afar askari oo katirsanaa ciidamada ilaalada xabsiga iyo 15 kamid ahaa maxaabiistii hubka qaadatay sida hadalka loo dhigay.
Cabdi Qani Qalaf oo ah Afhayeenka ciidamada asluubta ayaa xaqiijiyay in dagaalkii shalay ka dhacay gudaha xabsiga uu ahaa mid culus, wuxuu carabaabay in qaar kamid ah maxaabiista xabsiga ku xiran ay hubka ka qaateen ciidamo ilaala ahaa sidaasna uu dagaal culus ku bilaawday.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada loo yaqaan Alpha Group ee Mareykanku tababaray ay si ulakac ah ulaayeen maxaabiis aan hubaysnayn oo ku xirnaa qaar kamid ah qolalka xabsiga dhexe.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaar kamid ah maxaabiistii xabsiga dhexe ku xirnaa ay usuurtagashay in ay baxsadaan balse arrinkaas ma xaqiijin DF-ka, warar si aad ay layskula dhaxmarayo baraha bulshada ayaa sheegaya in maxabuus sanaddii 2014 dil lagu xukumay 10 sano oo xarig ah ay u suurtagashay in uu baxsado.